Nhau, 14 Ndira 2013
Muvhuro 14 Ndira 2013
Masangano anomirira vashandi vehurumende ari nhengo dzesangano reApex Council, anonzi ari kutarisirwa kusangana muHarare neChipiri kuti azeye matambudziko akatarisana nesangano reApex Council pari zvino.
Ndira 11, 2013
Muzvinafundo Gordon Chavunduka Vanoshaya muHarare
Muzvinafundo munyaya dzemagariro evanhu, VaGordon Chavunduka, vashaya neChishanu muHarare mushure mekurwara nechirwere chegomarara.
Varairidzi vachangopedza zvidzidzo zvavo zvehurairidzi paHillside Teachers’ College kuBulawayo vanoti vari kukundikana kuwana nzvimbo dzekudzidzisa mudunhu reMidlands ravakasarudza
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanonzi vaudza makurukota avo kuti atsvage mari yesarudzo kunze.
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vadaidzira musangano wechimbi chimbi neChina wekuita nenhengo dzeZimbabwe Electoral Commission.
aMwonzora Vanoti Zvinetswa Zvava Zvishoma Munzira yeBumbiro Idzva
Masachigaro ekomiti iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, anonzi akasangana neMuvhuro muHarare akawirirana pane zvinetswa zvishanu kubva muzvitanhatu zvinonzi zvanga zvasarira.
Ndira 07, 2013
Vagari vemunzvimbo yekwaChipfunde mu Ward 8 mudunhu reUzumba vanoti vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana nevatsigiri veZanu PF.
Kunetsana muApex Kotanga Zvakare
Pava nekusawirirana kukuru pakati pemasangano anomirira vashandi vehurumende, mushure mekunge Amai Tendai Chikowore vanyorera hurumende tsamba vachida mvumo yekuti ivo nekomiti yavaive nayo muApex Council vatungamire zvakare nhaurirano dzemihoro
Mtukudzi Otekenya Magitare muWashington DC neChishanu
Muimbi ane mukurumbira munyika, Oliver Mtukudzi, ari kuridza mimhanzi yake mu Washington DC muAmerica nemusi weChishanu.
Zvirimwa Zvoparadzwa neMakonye
Tarisiro yevakawanda yekuita goho rakanaka mwaka uno, inenge yava kuvhiringwa nemakonye anonzi ari kuparadza zvirimwa mumatunhu akawanda munyika.
Ndira 03, 2013
Kanzuru yeHarare Inoti Easipark Haina Masimba eKudzinga Vashandi
Kanzuru yeHarare inoti kambani yeEasipark inofanira kudzorera pabasa vashandi vayo makumi mana vayakadzinga basa.